Fahazarana: Aza Mora Kivy
3 Aza Mora Kivy
Maro no milaza fa afaka roatokombolana ny olona vao tena zatra amin’ny zavatra iray vaovao. Hitan’ny mpikaroka anefa fa mety ho latsaka na hihoatra an’izany ny fotoana ilain’ny olona sasany mba hanaovana fiovana lehibe. Tokony hahakivy anao ve izany?
Aoka hatao hoe te hizatra hanao fanatanjahan-tena intelo isan-kerinandro ianao.
Tratranao ny tanjonao ny herinandro voalohany.
Indroa ihany ianao no nanao fanatanjahan-tena ny herinandro faharoa.
Tratranao indray ny tanjonao ny herinandro fahatelo.
Indray mandeha ihany ianao no nahavita ny herinandro fahefatra.
Tratranao indray ny tanjonao ny herinandro fahadimy, ary hoatr’izay foana nanomboka teo.
Nila iray volana sy herinandro ianao vao zatra nanao an’ilay fanatanjahan-tena. Hoatran’ny ela be ny fahitanao an’izany, nefa faly ianao fa tratranao ny tanjonao ary manana fahazarana tsara ianao izao.
TORO LALAN’NY BAIBOLY: “Mety ho lavo impito ny marina, nefa ho tafarina ihany.”—Ohabolana 24:16.
Milaza ny Baiboly fa tsy tokony ho mora kivy isika. Ny tena zava-dehibe mantsy dia hoe impiry isika no tafarina, fa tsy hoe impiry isika no lavo.
Ny tena zava-dehibe dia hoe impiry isika no tafarina, fa tsy hoe impiry isika no lavo
Aza mieritreritra hoe tsy hahomby mihitsy ianao raha tsy nahomby indray mandeha. Efa ampoizina ny hitrangan’izany.
Izay tsara vitanao ifantohana. Izao, ohatra, eritreretina raha efa miezaka hifampiresaka tsara amin’ny zanakao ianao: ‘Oviana aho no nahavita nifehy tena farany, ka tsy nivazavaza tamin’izy ireo na dia te hanao an’izany aza? Inona kosa no nataoko tamin’izay? Ahoana no hahavitako an’izany indray amin’ny manaraka?’ Tsy hitsetra tena ianao raha misaintsaina toy izany, fa vao mainka hiezaka hanatratra ny tanjonao.
Afaka manampy anao koa ny toro lalan’ny Baiboly mba tsy hanahy be loatra, hanana tokantrano sambatra, ary ho afa-po amin’ny fiainana. Raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia miresaha amin’ny Vavolombelon’i Jehovah na tsidiho ny tranonkalanay jw.org/mg.
“Aoka ny masonao hibanjina ny eo anoloanao.”—Ohabolana 4:25.
“Manadino ny zavatra any aoriana aho ary mikely aina hanatratra ny eo aloha. Miezaka ho tonga amin’ny tanjona aho.”—Filipianina 3:13, 14.
Hizara Hizara 3 Aza Mora Kivy